Badalona, ​​site n'oge ndị Rom gara aga na ndị njem nleta ugbu a | Akụkọ Njem
Luis Martinez | | Spain obodo, Ihe ị ga-ahụ
Badalona nwere ikike ịbụ otu n'ime ógbè ndị ahụ gbasara mgbasawanye nke nnukwu obodo, n'ọnọdụ ya Barcelona. Agbanyeghị, ọ gara n'ihu ịbụ obodo nweere onwe ya na obodo nke anọ kachasị n'ọnụ ọgụgụ na mmadụ niile Catalonia.
Tụkwasị na nke ahụ, mmalite ya malitere n'oge kachasị kpam kpam n'oge ochie, dị ka e gosiri site na Iberian na Layetan ka dị achọpụtara na gburugburu ebe obibi ha. Otú ọ dị, e kere ya dị ka obodo site na ndị Rom gburugburu 100 BC n'okpuru aha nke Baetulo. N’ezie, obodo a nwekwara otu n’ime ezigbo ala ọdịbendị Latịn dị na Spen. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere Badalona, ​​anyị na-agba gị ume ịnọgide na-agụ ihe.
1 Ihe ị ga-ahụ na Badalona
1.1 Pont del Petroli, akara nke obodo
1.2 Ebe obibi ndị mọnk Sant Jeroni de la Murtra
1.3 La Badalona ulo oru
1.4 Parks, ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Badalona
1.6 Agbata obi Dalt de la Vila
1.7 Museumlọ ihe ngosi nka nke Badalona
1.8 Oflọ nke Dolphins na Ogige nke Quinto Licinius
Ihe ị ga-ahụ na Badalona
Kpọmkwem kpakpando ndị Rom bụ otu n'ime ebe nkiri dị ukwuu nke obodo Catalan. Na, na-esote ha, osimiri mara mma, ogige ntụrụndụ mara mma na ezigbo ihe ncheta. Anyị ga-eleta ebe ndị a niile.
Pont del Petroli, akara nke obodo
Pont del Petroli na ụlọ ọrụ Anís del Mono
Ihe ndozi a, nke na-aga 250 mita n'ime oke osimiri, bụ otu n'ime mmanya site na obodo Catalan. Ewubere ya na 1965 maka nnukwu tank ụgbọ mmiri ịhapụ ngwongwo ha na tankị e wuru maka nke a.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na a ga-akwatu àkwà mmiri ahụ na 2001, mana echekwara ya site na mbibi site n'aka otu ndị si Badalona nke onye isi nri achịcha achịcha. Josep Valls. Ugbu a, ọ bụ nnukwu ebe ị na-eme ndakpu ala mmiri na, karịa ihe niile, ka ị na-agagharị na-ekpori ndụ magburu onwe ya anyanwụ dara.
Ebe obibi ndị mọnk Sant Jeroni de la Murtra
Ga-ahụ ebe obibi ndị mọnk a n'akụkụ nke ọzọ nke okporo ụzọ. Ọ bụ otu n'ime ọla gothic nke ógbè Barcelona. Mbido mbụ ya sitere na narị afọ nke iri na abụọ, ọ bụ ezie na emesịrị gbasaa site na itinye cloister, ụka, kichin na okpuru ulo. Ọ na-pụta ìhè a ụlọ nchebe nke ejiri gbochie mwakpo ndị ohi si n’akụkụ mmiri.
La Badalona ulo oru
N'ime ụlọ ọrụ Anís del Mono
The Catalan obodo na-enye gị a dum ulo oru nketa esorowo mgbe ọ mepụtara n'echiche a na narị afọ nke XNUMX. Otu n'ime ụlọ ndị a na-anọchi anya ụlọ ọrụ ochie nke Anís del Mono, nke taa bụ ihe ngosi nka gbasara ịkọwapụta ọdịnala nke mmanya a.
Okwesiri ileta ya ụlọ ọrụ nke Companylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahịa na Mmepụta, ụlọ ọgbara ọhụụ wuru na 1899 site Jaime Botey na Garriga, onye bụkwa onyeisi obodo nke obodo ahụ. A ga-ahapụrụ ụlọ ahụ ihe ngosi nka na-atọ ọchị. Ma, a kwụsịla ọrụ ahụ nwa oge.
Parks, ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Badalona
Nwere ike Solei i Ca l'Arnús Park
Otu n'ime ebe kachasị mma na obodo Catalan bụ nnukwu ogige ntụrụndụ ya. A ngụkọta nke 96 hekta nke obodo bu ahihia ndu na ngụgụ ziri ezi maka ndị bi na ya. N'etiti ha Nwere ike Solei na Ca l'Arnús ogige. Nke a ezigbo botanical ubi nwekwara a ọdọ na obere obí eze, elu dị ka nke Lelee na Mmiri na ọbụna a grotto.
Yana a, ndị ọzọ ogige ke obio bụ nke Turó d'en Caritg, emi odude ke obot; onye Montigalá, zuru oke maka ije; nke Gran Sol, na ụfọdụ ụdị Asia; nke Nueva Lloreda, na akụrụngwa egwuregwu, na onye Casa Barriga.
Osimiri Barca María
Obodo nwere kilomita ise nke osimiri nke nwere ọnọdụ kachasị mma ka ịnụ ụtọ ịsa ahụ yana jiri akụrụngwa zuru oke ka ọbịbịa gị gaa na nke ọma. N'ime ndị a, anyị ga-ekwu banyere osimiri nke Barca María, nke Cristall, nke ndị Ọkụ azụ̀, nke ọdụ ụgbọ y de la Mora.
Agbata obi Dalt de la Vila
Ọ bụ aha a na-akpọ obodo ochie nke Badalona, ​​ruo ọtụtụ narị afọ, ezigbo etiti akwara obodo ahụ. Dịka ị nwere ike iche, n'ime ya ị nwere ọtụtụ ihe ncheta mara mma. N’etiti ha, ndị foduru nke roman amphitheater en Carrer de Les Eres.
Ma karia ihe nile, bu ihe di oke onu ahia chọọchị Santa Maria, nwere nnukwu ụlọ Renaissance façade na nnukwu ụlọ mgbịrịgba. Na, dị nnọọ nso na ya, na Torre Vella, ụdị ọmarịcha ụlọ obibi mara mma nke malitere na narị afọ nke XNUMX. Çlọ elu nke Plateresque ya na okpuru Gothic ya pụtara na nke a.
N'ikpeazụ, ahapụla akụkụ ochie nke obodo ahụ na-ahụghị ụlọ ndị mara mma na ụdị Noucentista na Modernista. Ọmụmaatụ, Ca l'Amigó, Nwere ike Clapés na Atụmatụ Houselọ.
Museumlọ ihe ngosi nka nke Badalona
Mpempe akwụkwọ Badalona
Anyị agwala gị banyere nnukwu ihe nketa ihe ochie nke achọtara n'okpuru ala nke obodo Catalan. A akụkụ nke ndị a foduru na-kpughere ke nnukwu ngosi nka nke transports ị n'okporo ámá nke Baetulo na narị afọ nke XNUMX BC.
Fọdụ n'ime ọla achọpụtara na ya odika 3400 square mita bụ mmiri ọkụ, nke mbibi ma ọ bụ isi n'okporo ámá na, karịa ihe niile, ihe Venus nke Badalona, Ihe oyiyi 28-centimita na-amalite site n'oge ntọala obodo ahụ.
Oflọ nke Dolphins na Ogige nke Quinto Licinius
Ga-enwe ikike ịga leta ụlọ ọrụ abụọ a n'ọnụ ụzọ ụlọ ebe ngosi nka dị. Na Lọ Dolphin Ọ dịkwa n'okpuru ala ma nata aha ya site na ihe dị oke ọnụ dolphin Mozis Ha na-achọ ọdọ mmiri ha mma iji chịkọta mmiri ozuzo. Ọ bụ nnukwu domus Towerlọ elu Rome nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita asatọ, ọ bụ ezie na taa ị nwere ike ịhụ naanị narị atọ.
Maka akụkụ ya, nke Ogige nke Quinto Licinius o nwere ike imechu gi ihu. Ihe ị na - ahụ taa bụ ụdị ọdọ mmiri nke, n’oge ya, ga - ejupụta na osisi na ifuru. Agbanyeghị, ịnwere ike ịmata otu ọ dị site na ntụrụndụ nkịtị nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye. Na ebe a, ndi Ulalọ ọgwụ Tabula, ụdị nkwekọrịta nke kwadoro Ise Licinius dị ka onye nchebe nke Baetulo na ị nwekwara ike ịhụ na ụlọ ihe ngosi nka.
N'ihi ya, ihe dị mkpa bụ Roman gara aga nke Badalona na, kwa afọ, obodo amalite Ememme Magna, nke ndị agha Latin na-agagharị n'okporo ámá ya na ebe ndị omenkà nke oge a na-etinye n'akụkụ ya.
Na mmechi, ọ na-enye gị ọtụtụ ihe Badalona. N’ime ihe nketa ndị Rom dị mkpa, ị ga-agbakwunye ihe ncheta ndị dị oké ọnụ ahịa, nnukwu ogige ntụrụndụ na osimiri ndị mara mma. You gaa n’obodo a, ị gaghị akwa ụta. Ọzọkwa, ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ụzọ njem gị mee ihe ndị ọzọ, kpọtụrụ nke anyị ndepụta nke ogige mmiri kachasị mma na Catalonia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Badalona
Ije ije na Costa Dorada: Ihe ị ga-ahụ na ihe ị ga-eme